पोर्टल्यान्ड र साल्ट लेक सिटीको स्थापना: FSX, FSX: SE वा P3D4?
प्रश्न पोर्टल्यान्ड र साल्ट लेक सिटीको स्थापना: FSX, FSX: SE वा P3D4?
4 महिना3सप्ताह पहिले #1352 by gero-1954
स्थापनाको सुरुवातमा: मैले FSX, FSX: SE वा P3D4 को लागि स्थापना गर्न विधा कसरी निर्णय गर्न सक्छु?
म सबै तीन सिमुलेटरहरू छन्, तर डाउनलोड फाईलको ठूलो साइजबाट, यो मलाई लाग््छ कि दृश्य केवल P3D4 द्वारा सक्षम हुनेछ, र यसैले मलाई मात्र P3D4 को लागि स्थापनाको आवश्यकता पर्दछ।
4 महिना3सप्ताह पहिले #1353 by कप्तान ब्लक
FSX त्यसोभए धेरै ह्यान्डल गर्न सक्छु, मैले धेरै पटक स्थापित गरेको छु। केवल जुनसुकै सिमुलेटर तपाइँ कुन दृश्यहरू स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ छनौट गर्नुहोस्, सरल रूपमा।
4 महिना3सप्ताह पहिले #1355 by Dariussssss
त्यहाँ एक थप विकल्प छ, दृश्यरी स्थापनाकर्ता अनुप्रयोग। म यो FSX को लागि थियो, तर मलाई निश्चित छ कि यो P3D को लागि पनि काम गर्दछ। उत्कृष्ट उपकरण।
4 महिना3सप्ताह पहिले #1358 by gero-1954
(नवीनतम हो?) स्थापनाकर्ता 11.1, मेरो पास सिम्युलेटरको लागि स्थापना गर्ने विकल्प छैन। म केवल "स्वचालित" र "विशिष्ट" स्थापनाको बीच चयन गर्न सक्दिन। म सधैं मेसेज गर्न चाहन्छु कि मलाई कहाँ स्थापना गर्न निर्णय गर्ने हो, तर यस अवस्थामा केवल FSX-path उपलब्ध छ, FSX: SE र P3D4।
सायद म अरू केहि प्रयास गर्दछु। यद्यपि, तपाईंको जवाफको लागि धन्यबाद। गेरो
3 महिना2सप्ताह पहिले #1372 by rikoooo
यदि तपाइँ "स्वचालित" स्थापना रोज्नु हुन्छ तब सूचीमा सिम्युलेटर चयन गर्नुहोस्, यदि तपाईंको सिम्युलेटर सूचीबद्ध छैन भने यसको अर्थ तपाईंको सिमुलेटर सेटअप सही छैन। स्थापनाकर्ता तपाईको कुञ्जीको लागि तपाईंको रजिस्ट्रीमा हेर्दछ जुन तपाईंको सिम्युलेटरको पूर्ण पथ समावेश गर्दछ, यदि कुञ्जी अवस्थित छैन भने त्यसमा सिम्युलेटर नभएको होइन वा खराब सेटअप थियो।
3 महिना 1 हप्ता पहिले #1373 by gero-1954
धन्यवाद - अन्तिम जवाफ एक्कासि थियो जुन मैले मैले आशा गरेको छु। यसले काम गर्दछ, जुन सिम्युलेटर प्रयोग गर्नुपर्दछ, स्वचालित रूपमा एक चरण पछि आउँछ।
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.299 सेकेन्ड